09 | August | 2017 | Danya Wadi
ဘာသာခြားများ အရေးကိစ္စများတွင် မစွတ်ဖက်ရန် သီတဂူ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ထုတ်ပြန်
By danyawadi August 9, 2017 Leaveacomment
သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၇ M-Media သတင်း- သီဟ အခြားကိုးကွယ်ရာ ဘာသာများ၏ အရေးကိစ္စများတွင် ဝင်ရောက်စွတ်ဖက် နှောက်ယှက်ခြင်း မပြုရေး၊ ဘာသာရေး ကို ခုတုံးလုပ်၍ အမုန်းစကား ပြောဆိုခြင်း၊ မဟုတ်မမှန် ဝါဒဖြန့်ခြင်းများအပေါ် ထောက်ပံ့ ကူညီသူများကို ကန့်ကွက်ကြောင်း သီတဂူနိုင်ငံတကာ ဗုဒ္ဓအကယ်ဒမီ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွှတ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဘာသာပေါင်းစုံ ညီလာခံအပြီး၌ တက်ရောက်လာသော ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် သုတေသီများက ဩဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ၂ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးမှုများအပြီး အချက် ၁၀ ချက်ပါဝင်သည့် ကြေညာချက်တစောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါသဘောတူ ကြေညာချက် ၁၀ ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၁။ […]
နန်းလောဝ် VOA ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်း စစ်ဆေးနေတဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဖော်ပြမထားဘူးလို့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Human Rights Watch က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာအစိုးရက လက်ခံဖို့ လည်း တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ နန်းလောဝ်က တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေ စွပ်စွဲနေသလို ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု၊ လူသားထု အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုမျိုး လုပ်ခဲ့တဲ့ အထောက် အထား တွေ […]
အိစ္စလာမ်​ဘာသာဝင်​များ၏ အထွတ်​အမြတ်​ထားရာဟာဂ်ျ​ဘုရားဖူး (၁၈၈၉ – ခုနှစ်​) မှ အလွန်​စွဲမက်​ဖွယ်​​ကောင်း လှ​သော ဓာတ်​ပုံ ၁၅ ပုံ အ​ကြောင်း​လေးဖြစ်​ကြပါတယ်​။ Ever wondered what Hajj was like more than 125 years ago? These fascinating photos will give youaglimpse of what it was like. The photos were taken by ʻAbd al-Ghaffār, al-Sayyid, an Indian physician who resided in Makkah and they are some […]